India: Fankafizana Sarimihetsika RajniKanth, Bolywood sy Fandinihana Tranonkala · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2018 15:59 GMT
Herinandron'ny fankafizana sarimihetsika izao, ary tsy avy any Bollywood fa avy any Kollywood na orinasa Tamil mpamokatra sarimihetsika. Rajnikanth's (na Rajni) Sivaji: The Boss (Ny Tale) dia andrasana hivoaka rahampitso (Zoma, 15 Jona 2007) ary nahatratra taha farany ambony tany amin'ireo mpankafy azy ny siosion-dresaka momba ilay sarimihetsika. Mpilalao mikarama lafo indrindra ao India i Rajni, ary manana mpankafy maro manaraka zy ao Japana. Eny, marina izany ao Japana, ao izy no foto-dresaky ny Praiministra Indianina sy ny Praiministra Japoney izay nihaona tao Tokyo, volana vitsy lasa izay. Izany no herin'ny lazan'i Rajni. Manana lahatsoratra iray misy sary marobe momba ny fankafizana an'i Rajni ao Japana i Onion Dosa.
Sarimihetsika lafo indrindra notontosaina tao India ny Sivaji; The Boss. Alohan'ny hijerena ilay sarimihetsika sy ny fanehoankevitr'ireo mpankafy, ireto misy zavatra mahaliana avy amin'ny Techowaves momba ilay sarimihetsika :
1. Nampiasa artista zatovo miisa 2500 ho an'ny seho fampidirana an'i Ranikant ny tale Shankar.
2. Trano vita tamin'ny fitambaranà fitaratra goavambe no natsangana mba handraketana ny hiran'ny Sahana.
3. Sambany ny Fakantsary dizitaly 4K DI no nampiasaina tao India ho an'io sarimihetsika io.
Nanomboka tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ny isa miverina ofisialy ho an'ny fivoahan'ny Sivaji ka nanoratra i Kirukkal (Scribblings) hoe:
6 andro alohan'ny ivoahan'i Sivaji ka raha mipetraka any Etazonia ianao dia vidio ny tapakilanao ao amin'ny IndiaGlitz! ireto misy sarin'i Sivaji voafantina!
Avy amin'ireny sary voafantina ireny dia aleo isika hikisaka ho amin'ireo olona izay mangetaheta hijery ny sarimihetsika. Nilahatra be ireo mpankafy, andro vitsy mialohan'ny fivoahany mba hividy tapakila ho an'ilay seho voalohany notsiriritina fatratra. Resaka nivaona: any India, afaka mividy ny tapakilanao ianao alohan'ny fivoahana amin'ny fomba ofisialin'ilay sarimihetsika ary ho an'ny olona maro, dia tena zava-dehibe ny mijery ilay horonantsary amin'ny andro voalohany andefasana azy.
Manoratra i Rising Tide:
Nanontany tena aho raha lasa adala ireo olona. Amin'ny anaran'Andriamanitra, inona ireto olona milahatra amin'ny 7 maraina ireto. Aaay, azoko ity sary ity. Mitantara ny zava-drehetra io sary io. Zavatra iray no mazava, adalan'ireo olona malaza toa an'i Rajinikanth ireo olona any India. Kintana Aziatika faharoa mikarama lafo indrindra.
Ka mba ohatrinona ny tapakila iray ho an'ny seho voalohany amin'ny andro voalohany? Manoratra i Randomly:
Mitentina 12OO Rs ny andro voalohany sy seho voalohany/-… Ozona ho an'ny kaontiko any amin'ny banky.
Amin'ny andro faharoan'ny seho voalohany aho – 500 Rs/-.
Mientanentana toy ny elektrona ao amin'ny toetrany feno fientanentanana. Ny Photon Rajini !!
Tsy ny rehetra no mpankafy an'i Rajni, ka nanoratra i Ghost Particle ao amin'ny Ary Nijanona Noho ny amin'i Sivaji ny Tontolo, raha tsy tia azy ianao dia avia manatevin-daharana ka manorata momba izany. Hazavainy ihany koa ny antony mety mahatonga ny herinandro vitsivitsy manaraka ho mandratra fo.
Eny ary, voalohany indrindra, tsy dia mpankafy an'i RajniKanth aho. Ny antony dia mety hoe satria halko ireo mpankafy azy. Ary eto no misy maha-sanganehana. 99 isanjaton'ireo Tamil Makkals rehetra ireo mpankafy. Ka noho izany dia toy ny hoe izaho irery no mifaninana amin'ny foko iray manontolo. Kanefa, izaho ilay angatra, ka hanao izay tiako atao aho. Ary ataoko zavatra ho teneniko amin'ny mpiray trano amiko izany (izay tsy ampy saina mivavaka amin'i Rajni) fa andeha hitroka sy hivarotra hosoka ny asan'ny Sivaji aho amin'ny andro amoahana azy. Kanefa eee, amin'iza aho no mihanihany. Andro iray fanampiny dia handady tsikelikely ny tazon'i Rajni… Eee.. mampatahotra izany. Tsy maintsy miova ho mpankafy ny sarimihetsika Tamil ianao vao hahatakatra ny herin'ireo sarimihetsika, na i Yoda aza tsy afaka hanazava io iray io. Tena matanjaka, izay no herin'ilay sarimihetsika. Ho lasa herinandro vitsivitsy mandratra fo ho ahy ity. Manantena fotsiny aho hoe tsy hametaka sary amiko ry zareo.
Noho ireo dokambarotra maro ireo, hiasa ve ny fandraikiraiken'i Rajni ka hahatonga fahombiazana ho an'ity sarimihetsika ity? Nanoratra hafa noho izay i Shyam K avy ao amin'ny Gajabuja Funda:
Satria mangotraka any amin'ny media rehetra ny vaovaon'i Sivaji, mihevitra aho hoe fotoana izao hanaovana faminaniana. Tsy mahomby ilay ataon'i Rajini. Midika izany fa hahazo tombony 30 crores eo ho eo ilay izy. Raha miverina amin'ny fotoana ianao, tsy tafavoaka i Baba, satria tombony 20 crores fotsiny no azony.
Avy ao India isika dia mivadika any amin'ny dindon'ny sarimihetsika Hindi na Bollywood amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha tsy mbola nahafantatra ianao, malaza be ao Afrika ity Bollywood ity, fantatra tsara any ireo olo-malaza Bollywood, toa an'i Amitabh Bachchan sy i Rekha. Manoratra ato amin'ity fanehoankevitra ity i Andrew Leonard avy ao amin'ny Salon:
Tena marina, afaka mahita mpankafy Bollywood eny anivon'ireo mpamily fiarakaretsaka ao New York. Herinandro vitsy lasa izay, niresaka tamin'ny mpamily fiarakaretsaka iray avy any Borkina Faso aho tao Afrika Andrefana, momba ny sarimihetsika Bollywood. Mety ho gaga ianao amin'ny lazan'ny sarimihetsika Bollywood ao Borkina Faso. Henoy ity, misy Andro ho fankalazana an'i India ao Borkina Faso!
Avy amin'ny sarimihetsika, mifindra iska ho any amin'ny fandinihana tranonkala sy fifamoivoizana ao India ary Shina. Raha raisina hoe ireo votoaty rehetra dia noforonina tao amin'ny tontolo virtoaly iray amin'ireo olana sarotra ho an'ny olona ao India sy Shina, ahoana no fomba handrefesana ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala? Misy kolotsaina ny amin'ny fomba andaniana ny zava-misy sy ny hoe ahoana ny andisoany ny fandrefesana ny fifamoivoizana ao amin'ny tranokala? Hafa kely ny fandrefesana ny fifamoivoizan'ny tranokala ao India sy Sina ary indraindray sarotra. Mikatsaka zavatra ho atsofoka momba io lohahevitra io i Jeremiah Owyang, fanta-daza mpahay tetikady amin'ny aterineto.